Guddoomiye, Saxar, Pouf, Shax, Sofa - Dcl Furniture
Hordhac ku saabsan xaqiiqda DCL
Warshadda DCL waxaa aasaasay oo aasaasay HaiCui oo ku taal Shengfang Town, Bazhou City Oktoobar 2013. Waxaan ku dadaalnaa inaan si joogto ah u qancinno macmiilka dareenka booska, raaxada iyo quruxda iyada oo loo marayo nashqadeynta xirfad-yaqaanka iyo xakamaynta tayada adag.
Warshadda DCL inta badan waxay soo saartaa Guddoomiye Cuntada, miiska cuntada, Stool, Pouf, Sofa iyo Ottoman. Waxaan leenahay macaamiisha ugu waaweyn jumladleyda iibiya, dukaanleyda iyo ka ganacsashada khadka tooska ah ee Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika iyo Bariga Dhexe.
Waaxda R&D waa guulaha ugu weyn iyo sidoo kale ujeedka koowaad ee Warshadda DCL, taasoo ka dhigaysa qaar ka mid ah fikradaha macaan ee run ah. Naqshadeyntayada ugu waaweyni waxay ka timaadaa fikradaha macaamiisha iyo abuuritaankeena. Dhanka kale, DCL waxay ka gudubtay BSCI badeecadeenu waxay heleen shahaadada FSC sanadka 2018.
Falsafadda warshadda DCL waa mid tayo-ku-saleysan qiimeheeda qiimaha lehna waa la bixin doonaa iyadoo la ilaalinayo degenaansho iyo tayo wanaagsan. Aaminaada waxaan u dhaqmeynaa sidii xirfadle oo lagu kalsoonaan karo iyo shirkad wax soo iibsi hadii fursad kasta oo aan kula shaqeyno. Ku soo dhowow inaad na soo booqato oo waxaan rajeyneynaa inaan kuu adeegno.
Waa tan sida loo xusho kuraasta miiskaaga cuntada: Iskeelka Raaxada, cabirrada miiska cuntada iyo kuraasta waa inay iswaafaqaan. Haddii aad ka cabbirto dusha sare ee miiska illaa dabaqa, miisaska cuntada badankood waxay u dhexeeyaan 28 illaa 31 inji dherer; dhererka 30-inji waa midka ugu badan. Fr ...
Maxaa loo isticmaalaa kursi ruxis? Xanuunka arthritis-ka iyo xanuunka dhabarka Xitaa waxaa la sheegay in Madaxweynihii hore ee Mareykanka John F Kennedy uu adeegsan jiray kursi ruxis si uu u yareeyo xanuunka dhabarka. Isticmaalidda kursi ruxmaya waxay kordhisaa socodka dhiigga ee jirka oo dhan, sidaas darteed u dirida oksijiin badan xubnaha kala goysyada, taasoo gacan ka geysaneysa fududeynta ...
Iyada oo la raacayo xakamaynta wax-ku-oolka ah ee dhawaanta ah ee 'Covid-19' ee Shiinaha, warshado badan ayaa dib u furey oo dib u bilaabay soo-saarka si tartiib tartiib ah. Qaar ka mid ah macaamiisheena ayaa isku dayaya inay sida ugu fiican u riixaan ganacsiga, xitaa waxay wali ku shaqeeyaan guriga. Waa qof keli ah oo wax ku ool u ah qof kasta, dhammaanteen waxaan rumeysan nahay in waxyaabaha ...
Kuraasta, saxarada, miisaska, kuraasta fadhiga, sofas iyo shelf
Alaabada loo diyaarshay
Tayada waa dhaqankeena